फेसबुक संस्थापक जुकरबर्गले दुई महिनामै कमाए ३० अर्ब डलर – Sandesh Munch
May 25, 2020 376
कोरोना भाइरसको महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदा गत मार्च मध्यदेखि विश्वको अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भइरहेको छ । अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्र तथा उद्योगहरूमा गम्भीर नकारात्मक असर परिरहेको छ । तर यो महामारी कतिपय अर्बपतिहरूका लागि भने निकै फापेको छ । महामारीका बेला अभूतपूर्व रूपमा अर्बौं कमाउनेमा फेसबुक संस्थापक मार्क जुकरबर्ग पनि परेका छन् ।
समाचार अनुसार, फेसबुक संस्थापक तथा सीईओ जुकरबर्गले पछिल्लो २ महिनामा मात्रै आफ्नो कूल सम्पत्तिमा ३० अर्ब डलरले वृद्धि गर्न सफल भएका छन् ।
ब्लुम्बर्ग अर्बपति सूचकांकअनुसार, मार्चको मध्यताका जुकरबर्गको कूल सम्पत्ति ५७ अर्ब ५० करोड डलर थियो । अहिले उनको सम्पत्ति बढेर ८७ अर्ब ५० करोड डलर पुगेको छ ।
योसँगै जुकरबर्ग विश्वका सर्वाधिक धनी मान्छेको सूचीमा तेस्रो स्थानमा उक्लिन सफल भएका छन् । जुकरबर्गभन्दा अगाडि अब अमेजन मालिक जेफ बेजोस र माइक्रोसफ्ट संस्थापक बिल गेट्समात्र छन् । बिल गेट्सको सम्पत्ति १ खर्ब ८ अर्ब डलर छ भने बेजोसको सम्पत्ति १ खर्ब ४७ अर्ब डलर रहेको छ ।
जुकरबर्गको सम्पत्तिमा व्यापक वृद्धि हुनुमा फेसबुक कम्पनीको शेयर मूल्यमा भएको उल्लेख्य वृद्धि प्रमुख कारण हो । सीएनबीसीको हालैको एक रिपोर्ट अनुसार, फेसबुकको शेयर मूल्यमा किर्तिमानी बढोत्तरी हुँदै हालै प्रतिशेयर मूल्य २३० डलर ७५ सेन्ट पुग्यो । फेसबुकले केही दिनअघि सपिङ प्लाटफर्म सार्वजनिक गरेसँगै कम्पनीको शेयर मूल्यमा उछाल आएको हो ।
महामारीका बीच करोडौं मानिसहरु घरभित्रै बस्न बाध्य भइरहेका बेला फेसबुकले पछिल्लो समय एकपछि अर्को नयाँ फिचर थप गरिरहेको छ जुन प्रयोगकर्ताहरूले निकै रुचाएका पनि छन् । जसमध्ये भिडियो कन्फ्रेन्सिङका लागि मेसेन्जर रुम्स निकै लोकप्रिय बनिरहेको छ र अर्को भिडियो कन्फ्रेन्सिङ एप जुमलाई टक्कर दिइरहेको छ ।
Prevदुनियाँमै अचम्मको ठाउँ जहाँ बिहे गरिदिनकै लागि छोरीलाई ज’बर्जस्ति मोटी बनाईन्छ
Nextभर्खरै चीनले दियो नेपाललाई एक्कासी निक्कै ठूलो खुशीको खबर !
भान्सा कोठामा तावा र कराई राख्न नजाने यस्तो हानी हुन्छ
भदौ १ गतेबाट फेरि भदौ ९ गतेसम्म सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने निर्णय
६ लाखको कोरोना परीक्षण पीसीआर विधिबाट गर्ने सरकारी लक्ष्य, २ लाखको बल्ल सकियो, ४ लाखको अझै कहिले ? (भिडियो)
कसरी भयो सुशान्तको मृत्यु ? आयो अन्तिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट
एकै परिवारका ९ जनाको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु, दागबत्ती दिने सम्म पनि कोहि भएनन,
१८ वर्षीया सपना रोका मगर पनि मृत शरीरलाई दागबत्ती दिन्छिन् (भिडियो सहित)
संकट हटाउन कुन राशीका व्यक्तिले के गर्ने ? जन्नुहोस